China Metal bhatani Vagadziri, Yakagadziriswa simbi bhatani Quotation - Nguo yehembe yenguo Co., Ltd.
Imba >Zvigadzirwa >Bhatani>Bhatani resimbi
Metal Mabhatani Mabhatani
Chinyorwa: Simbi / Brass
Saizi: 10mm + 655, 12.5mm + 633, 15mm + 831, kana seizvo zvinodiwa nemutengi
Ruvara: Nickel, Goridhe, Antique ndarira, Gun simbi, Yakasarudzika Ruvara
Belt bhurenge, inozivikanwawo sebhandi bhandi, yeganda musoro, chiuno musoro, bhureki, zvinhu zvinowanzo kuve zvakachena mhangura, zinc alloy, simbi, titanium chiwanikwa, nezvimwewo, kushandiswa kwepamusoro tembiricha kunyauka kutonhora kutonhora.
Angle nzara alias bump chipikiri, rivet, yakapinza nzara Iyo inoumbwa nezvikamu zviviri: chipikiri chivharo (chidimbu A) uye pasi pechipikiri (chidimbu B) .Kazhinji neI-buckle, jean buckle inoenderana nekushandisa mune dzakakora zvipfeko, senge majini, majean, nezvimwe.
Chibage, chinozivikanwawo segesi, nzombe ziso, mhango rivet; Zvinoenderana nechimiro ndeichi: akawedzera maRivet, madiki magegeti, kumucheto anodzvanya zviyo, kutenderera zviyo, denderedzwa chibage, sandara chibage, kutenderera chibage, kutenderera zviyo, kutumbuka zviyo, nezvimwewo .; Zvinoenderana nechinhu ichi: chibage chesimbi, chibage chealuminium, chibage chemhangura, zinc chiwanikwa chibage, chibage chesimbi, mapurasitiki uye nezvimwe.
Metal snap bhatani
TS ina-snap bhatani imhando yebhatani, inowanzozivikanwa seyenyore, bhatani rechitubu, bhatani rekusona.Iye ina-snap buckle inosanganiswa neS-mhando chitubu, icho chakakamurwa kuita zvikamu zvina zveABCD kubva kumusoro kusvika pasi.
Iyo cowboy buckle ine bhatani repamusoro (chidimbu A) uye mbambo yepasi (chidimbu B) Iwo mativi maviri akasanganiswa neA mhirizhonga modhi. Nekuti chimiro chemubatanidzwa chinotaridzika zvishoma senge chiChinese chimiro che "gong", chakatumidzwa zita rekuti "Ini hunhu buckle", inozivikanwawo se "cowboy buckle".